Maxaa ka jira in ciidamada kenya ay la wareegeen Amniga madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxaa ka jira in ciidamada kenya ay la wareegeen Amniga madaxweyne ku-xigeenka...
Maxaa ka jira in ciidamada kenya ay la wareegeen Amniga madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland?
Mandheera (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya Degmada Mandheera ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa sheegaya in Ciidamada Militariga Kenya ay la wareegeen amniga Madaxweyne Ku-xigeenka 1aad ee Maamulka Jubbaland, Maxamuud Sayid Aadan.
Madaxweyne Ku-xigeenka ayaa maalmihii la soo dhaafay wuxuu ku sugnaa Degmada Mandheera, kadib markii loo diiday in uu gudaha u galo qaar ka mid ah Degmooyinka Gobolka Gedo.
Wargeyska afka dheer ee Dailynation oo ka soo baxa dalka Kenya ayaa waxaa uu maanta daabacay in Ciidamada Kenya ay la wareegeen amniga Madaxweyne Ku-xigeenka, xilli la dejiyay hotel ku yaala Degmada Mandheera.
Sarkaal Militariga Kenya ka tirsan ayaa wargeyska u sheegay in Ciidamada Itoobiya ay Maxamuud Sayid Aadan u diideen in uu galo degmooyinka ay Beled Xaawo ka mid tahay, isla-markaana uu ku khasbanaaday in uu taggo Degmada Mandheera.
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo khilaaf uu kala dhaxeeyo Maamulka Jubbaland ayaa waxay Maamulada Degmooyinka Gobolka Gedo ku amartay inaanay la shaqayn Jubbaland, iyadoo qaar ka mid ahna ayba u hoggaansamayn.
Ciidamada Militariga Itoobiya oo kaashanaya Ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in Gobolka Gedo ay ka wadaan dhaqdhaqaaq liddi ku ah Maamulka Jubbaland, iyadoona la sheegay in Dowladda Somaliya ay Gobolka Gedo ka goyneyso Jubbaland, inteeda kale.
Ciidamada Difaaca Kenya oo iyaguna dhaqdhaqaaq ka bilaabay Gobolka Gedo ayaa waxaa maalintii Axada lagu arkay xuduuda Degmada Ceelwaaq, halkaasoo ay dhaqdhaqaaq ciidan ka wadaan.
Madaxda Jubbaland ayaa waxay Dowladda Federaalka ku eedeeyeen inay xaalad ka abuurtay Gobolka Gedo, ka dib markii Ciidamada Dowladda iyo kuwa Itoobiya ay u carbisay inay ka shaqeeyan, sidii gobolkaasi uu uga madax bannaanaan lahaa Jubbaland.
Ciidamada kenya oo la wareegay Ammaanka Jubbaland
madaxweyne ku xigeenka Jubbaland